Semalt: उमगांग मिट अनर्वेन्स्टेन ई-मेल अनड स्पाम
के तपाईंले कहिल्यै आफ्नो ईमेल खोल्नुभयो र तपाईंको इनबक्समा एक हजार भन्दा बढी अपठित ईमेल फेला पार्नुभयो, जसमध्ये 95 percent प्रतिशत तपाईं पढ्न चाहनुहुन्न? धेरै जसो उदाहरणहरूमा तपाईलाई यहाँ र त्यहाँ इमेल मेटाउन प्रेरित गरिन्छ, तर कामले तपाईलाई विचार गरीरहेको हुन सक्छ तपाईलाई चासोको ईमेल मेटाउने छैन भनेर निश्चित गर्न उत्सुक हुनुपर्दछ। यो डरलाग्दो हुन सक्छ जब तपाइँ सचेत हुनुहुन्छ कि तपाइँले अर्को हप्ता क्रमबद्ध दोहोर्याउनु पर्छ।
यसले इ-मेल समस्या कसरी बढ्दछ भन्ने कुरा सूचित गर्दछ, अधिक र अधिक अवांछित सामग्री तपाईंको इनबक्समा एक बिन्दुमा आउँदछ जहाँ तपाईं सम्पूर्ण खाता निष्क्रिय गर्न चाहानुहुन्छ। जे होस्, यो सम्भव छैन किनकि ईमेल फेसबुक, ईबे, पेपैल, इत्यादिसँग लि linked्क गरिएको छ, र ईमेल मेटाउँदा अनौंठो प्रकारको समस्याको परिणाम हुनेछ।
रस बार्बर, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक, बताउँछ कि कसरी निम्नलिखित चार कार्यनीतिहरूले स्प्यामरबाट उसको खाता पुन: प्राप्ति गर्न मद्दत गर्‍यो:
१. स्रोत ट्रयाक गर्नुहोस् जुन प्राय: तपाईंलाई अनावश्यक ईमेलहरू पठाउँदछ। ईमेलहरू मेटाउने काममा अल्छी दृष्टिकोण अपनाउनुहोस्। तिनीहरू मध्ये प्रत्येक खोल्नुहोस् र सदस्यता रद्द गर्नुहोस् र त्यसो गरेपछि, तपाईंको ईमेलमा प्रेषकको ठेगाना खोज्नुहोस्। त्यसपश्चात, प्रत्येक परिणामलाई हटाउन सुरक्षित मानिन्छ जुन तपाईंको परिणाम सूचीबाट खस्कन्छ। तपाईंले सदस्यता रद्द गर्नुभएको तथ्यको कारणले गर्दा, अब तपाईं त्यस्ता स्रोतहरूबाट ईमेलहरू प्राप्त गर्नुहुने छैन।
२. कानूनका लागि सबै वाणिज्यिक ईमेलहरूको सदस्यता रद्द विकल्प हुनुपर्दछ। आवश्यकताको बाबजुद, मैले महसुस गरें कि मेरा अधिकांश अनावश्यक ईमेलहरूमा रद्द गर्न वा सदस्यता रद्द गर्ने सुविधाहरूको अभाव छ। जब तपाइँले महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाइँ स्रोतबाट ईमेल प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ जुन अप्ट आउटको विकल्प छैन, निम्न ईमेल पठाउनुहोस्:
"कृपया लिनुहोस् (तपाईंको ईमेल ठेगाना सम्मिलित गर्नुहोस्) सूचीबाट यो ईमेल बन्द गर्नुहोस्। धन्यवाद"!
ईमेल पोइन्टमा भएको हुनाले कुनै पनि अन्य जानकारी थप्न आवश्यक पर्दैन। तपाईंले "सम्पन्न भयो" को रूपमा प्रतिक्रिया अपेक्षा गर्नु पर्छ। प्रमाणको रूपमा कि तपाईंले सफलतापूर्वक अनावश्यक ईमेलहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ।
Fold. फोल्डरहरू सिर्जना गर्नाले तपाईंको ईमेलहरू अगाडि बढ्दै सहज रूपमा नेभिगेट गर्न सक्षम गर्दछ। तपाईंको ईमेल प्रबन्धनको सन्दर्भमा यो उत्तम हस्तक्षेप हो किनभने यसले तपाईंलाई आगमन ईमेलहरूसँग डील गर्न र इनबक्सलाई सफा राख्न मद्दत गर्दछ। उदाहरण को लागी, मैले मेरो ईमेल भित्र सात फोल्डरहरु सिर्जना गरेको थिएँ र उनीहरूको प्राथमिक भूमिकामा निर्भर गर्दै बिभिन्न नामहरू दिएँ। यदि म ईमेल बचत गर्न चाहान्छु, यी मध्ये कुनै एक फोल्डरमा यो पूर्ण रूपमा भण्डार हुनेछ। यो सुनिश्चित गर्न मा महत्वपूर्ण छ कि मेरो इनबक्स सबै समयमा स्वच्छ र ताजा छ।
Once. एकचोटि तपाईले आफ्नो इ-मेल मिलाउनको लागि व्यवस्थित गर्नुभयो, तपाई पक्कै पनि यसलाई पहिलेको स्थितिमा फर्काउँनुहुन्न। तपाईको ईनबक्सलाई प्रभावी ढंगले प्रबन्ध गर्नुहोस् कि यो निश्चित गरेर कि तपाईले अवांछनीय ईमेलको साथ डिलिभर गर्नुभयो जुन उनीहरूले पप अप गर्दछ। यदि तपाईंले यसमा ढिलाइ गर्नुभयो भने, तपाईंलाई आफैंले हजारौं ईमेलहरूको साथ एकपछि अर्को क्रमबद्ध गर्न पाउनुहुनेछ। एक पटक अनावश्यक ईमेल फेरि निर्माण भयो, तपाईले स्थिति एक र दुई पटक दोहोर्याएर सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ।